Inona no fanomezana souvenir amin'ny dia? | Save A Train
Home > Travel Tips > Inona no fanomezana souvenir amin'ny dia?
Tadidinao ve ny dia rehetra nataonao, fomba fijery efa nankafizinao, sy ny sakafo efa nanandrana? Tsia angamba, ary izany no antony fahatsiarovana no fomba mety hahatonga ireo fahatsiarovana ireo haharitra mandritra ny androm-piainany. Inona no fahatsiarovana hoentina avy amin'ny dia? Ireto misy hevitra fahatsiarovana tsara indrindra hitondrana sombin-paradisa hiverina any an-trano.
Souvenir azo avy amin'ny dia: Akora fandrahoan-tsakafo
zava-manitra, saosy, anana, dia hitondra anao hiverina any amin'ireo tsiro, fofona manitr'ireo, sy ny fotoana ananan'io toerana manokana io. Voaporofo fa mahatadidy indrindra ny saintsika isika, ary ny sakafo no fomba tsara indrindra hiainana toerana iray. Ary, ireo akora mahandro dia hahatonga ny namanao sy ny fianakavianao hahatsapa fa niaraka taminao izy ireo.
Zavamaniry sinoa, saosy paty, ary na ny paty aza dia fahatsiarovana mahatalanjona entina miverina avy any amin'ny dia mankany Chine, na Italia, ohatra. Noho izany, tadidio ny manangona kitapo fanampiny ho an'ny sakafo ara-tsakafo, satria tsara kokoa ny manangona tsirairay ireo fahatsiarovana mahafinaritra ireo. Tsy maniry ny hanokatra valizy ianao mba hahitanao ny akanjo misy loko mena paprika.
Art eo an-toerana
Ny fanohanana ny kolontsaina sy ny mpanakanto eo an-toerana dia mampiseho fa mpandeha misaina sy mahay ianao. Vilia-saosy nolokoana tanana, lamba latabatra tenona, na lobaka vita amin'ny kofehy vita peta-kofehy dia fahatsiarovana mahafinaritra ho tian'ny namanao, fampiasana, ary fomba tsara hanehoana ny fankasitrahanao ny vondrom-piarahamonina nampiantrano anao.
Ny zava-kanto eo an-toerana dia fahatsiarovana mahafinaritra mba hamerenana amin'ny laoniny ny dia rehetra any Eropa sy Sina. Any Sina, mety hahazo jiro mena ianao raha mirary soa, avy any Russia a tanana Domovichok hiambina ny tranonao na vera labiera mangatsiaka avy any Prague ho an'ny dadatoany na rahalahinao tia labiera izany. Boribory mahafinaritra inona avy Eco-namana mandeha, fandraisana, ary fanaparitahana ny kolontsaina mahafinaritra erak'izao tontolo izao.
Souvenir ho an'ny haingon-trano
Ataovy ao an-tranonao ny dianao, miaraka amin'ny vazy tsara tarehy Delft na tulip hazo avy any Netherlands. Ny souvenir amin'ny haingon-trano dia azo atao tanan-tanana, ary matetika dia hitantara ny kolontsaina sy ny tantarany niaviany.
Takelaka seramika eo amin'ny rindrina, kristaly bohemia avy any amin'ny Repoblika Tseky, na famantaranandro «cuckoo» avy amin'ny Black Forest dia fahatsiarovana lehibe ho entina mody avy amin'ny dianao mankany Eropa.
Souvenir azo avy amin'ny dia: Toaka eto an-toerana
Ny fizarana tantara avy amin'ny dia lavitra tamin'ny vera iray toaka tena tsara dia manampy amin'ny fampahatsiahivana ireo antsipirian'ny tsiro rehetra, sy fotoana mahafinaritra. Ny fitondrana zava-pisotro misy alikaola ao an-toerana dia fahatsiarovana malaza entina avy any Eropa, indrindra raha an zava-pisotro misy alikaola daholo dia tokony hanandrana eran-tany.
Noho izany, Limoncello avy any Italia, na Riesling divay avy amin'ny lohasaha Rhein any Alemana, na izany na tsia, ho faly ireo handray izany fanomezana izany. Raha tsy azonao antoka ny zava-pisotro eto an-toerana, tandremo ny solomaso eo amin'ny latabatry ny mponina mandritra ny sakafo hariva na anontanio ao amin'ny trano fisotroana eo an-toerana.
Ny firavaka dia fomba mahavariana hitondrana ny dia ataonao akaikin'ny fo. Vakana rojo mahatsiravina, kavina amber avy any Polonina, na haba vita amin'ny volafotsy manintona, dia sombintsombiny tsy miala amin'ny lamaody mihitsy, koa, tsy mandany fotoana izy ireo.
Noho izany, raha maniry ny hitondra fahatsiarovana miavaka ianao, dia tonga lafatra ny firavaka. Mahagaga tokoa ny manampy pesona amin'ny tananao amin'ny firenena rehetra. Na izany aza, rehefa mividy firavaka amin'ny firenena vahiny, mitandrema amin'ny fikirakirana vola ary aza miditra amin'ny iray ny hosoka fitetezana malaza eran-tany.
Item iray angonin'izy ireo
Adinoy ireo rojo vy sy karatra paositra, raha ny namanao dia manangona, tsy misy na inona na inona milaza fa miraharaha bebe kokoa noho ny sombin-javatra tokana azon'izy ireo ampiana amin'ny fanangonana azy ireo. Samy manangona zavatra ny tsirairay: sombin-labiera voaravaka avy any Prague, Sary sokitra Murano, Rosiana Babushka amin'ireo sarivongana saribakoly, ary ohatra vitsivitsy monja ireo.
koa, solomaso voatifitra, satroka, ary ny tsimatra dia fahatsiarovana mahatalanjona hafa azo entina miverina amin'ny dia any Eropa. Hung eo amin'ny rindrina, ampiasaina amin'ny antoko, na voatahiry ao anaty rakikira, tian'ny namanao ny fotoana laninao nitadiavana an'io sombin-javatra manokana io sy ny tantara ao ambadik'izany.
Ny fitsaboana mamy sy mahaliana dia hametraka tsiky ary hisarika ny sain'ny mpihaino. Ny sakafo no fomba tsara indrindra hiainana toerana iray, amin'ny alàlan'ny tsiro rehetra mandeha amin'ny kolontsaina sy ny tantara. Ohatra, Paris Tsy fahatsiarovana matsiro fotsiny ny macaron. Mbola azon'izy ireo ihany koa ny fotony sy ny fanahin'ny Renaissance frantsay amin'ny fahalavorariany, endrika mamirapiratra sy tsara tarehy.
Noho izany, raha manaikitra vitsivitsy dia manjavona ity fahatsiarovana ity, ny tsiro sy ny fahatsapana mahatalanjona mijanona miaraka amintsika mandrakizay. Ny fahatsapanay dia hahatadidy foana ny fotoana voalohany nanandramantsika sôkôla Soisa, ary ny mpandray ny fahatsiarovana fahatsiarovana anao dia hahatsiaro ihany koa. Raha fintinina, fahatsiarovana mamy dia fahatsiarovana mahatalanjona entina miverina amin'ny dia any Eropa.
Souvenir azo avy amin'ny dia: Clothing
Ny fiantsenana no iray amin'ireo zavatra tsara indrindra hatao any ivelany. Azonao atao ny manova ny fombanao, ampio entana manokana ao anaty ny lambanao toy ny fehin-kibo nentim-paharazana avy any Russia, palitao hoditra avy any Italia, sy ny maro hafa. Raha mikasa ny hitondra tapa-damba ho an'ny namanao ianao, dia tokony ho fantatrao ny fomban'izy ireo sy ny habeny mazava ho azy.
Na izany aza, misy fahatsiarovana akanjo maro azo isafidianana any Eropa, izay tsy misy fisafidianana habe. Berlin dia mety amin'ny fiantsenana vintage, T-shirt avy amin'ny tsenan'ny arabe any Londres, fatorana mangatsiaka avy any Paris na Italia, dia vitsivitsy fotsiny ireo hevitra fahatsiarovana akanjo hoentina manerantany.
Ireo souvenir Cliche entina mitsangatsangana any Eropa
Tsy mety diso mihitsy ny fahatsiarovana mahazatra anao. Ohatra, namana fanomezana sy fianakaviana keychain Eiffel Tower, Rosiana Matryoshka hazo, na clogs hazo avy any Amsterdam, ireo dia ho fahatsiarovana mahafinaritra sy eritreritra. Ary, azonao atao ny mividy an'ireto souvenir eoropeana kilasika ireto any amin'ny seranam-piaramanidina, na fiantsonan'ny fiaran-dalamby, amin'ny minitra farany. Na izany aza, diniho izany fahatsiarovana izany’ ho avo kokoa ny vidiny ao amin'ny fivarotana gara, noho ny ao an-tanàna.
eto amin'ny Save A Train, faly izahay manampy anao amin'ny fikasana dia tsy hay hadinoina tany Eropa. Afaka mandeha lamasinina mora foana ianao amin'izay toeran-kaleha any Eropa, miantsena sy mankafy mora mandeha dia valizy feno harena sy fahatsiarovana.
Te hampiditra ny lahatsoratry ny bilaoginay hoe "What Souvenirs Hitondra amin'ny Dia Izahay" ve ianao??"Eo amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmg%2Fsouvenirs-bring-trip%2F - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Fiaran-dalamby Britain, Train Travel Repoblika Tseky, Fiaran-dalamby Travel Denmark, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Train Travel Holland, Fiaran-dalamby Hongria, Fiaran-dalamby any Italia, Train Travel Russia, Fiaran-dalamby Switzerland, Train Travel The Netherlands, Train Travel UK, Travel Europe